Sonos na-ebupụta Arc, barda ụda na ihe ịtụnanya | Akụkọ akụrụngwa
Na weebụsaịtị a anyị maara Sonos nke ọma, ha na-enye ndị ọkà okwu okwu na akpakọrịta mmekọrịta na ọtụtụ ọrụ egwu egwu egwu yana ndakọrịta na ndị enyemaka na-enyere aka, yana AirPlay 2 na usoro ndị ọzọ. Firmlọ ọrụ North America ahụwo ụzọ dị mkpa na ogwe ụda, ihe atụ bụ Sonos Beam nke nyere ezigbo nsonaazụ dị otú ahụ. Ọ bụ ya mere Sonos ji kpebie ịmalite Arc, ụda na-ada ụda nke na-abịa dochie Playbar yana ise na Sub, mara ngwaahịa Sonos ọhụrụ niile na anyị, Ma nọrọ na-ege ntị, anyị ga-enwe omimi miri emi n'oge na-adịghị anya.
1 Sonos Arc - Ezi ụda
2 Sonos Sub - Companylọ ọrụ zuru oke
3 Sonos Ise - Rightkpụrụ Kwesịrị Ekwesị
Sonos Arc - Ezi ụda
Dị ka anyị kwuru, Sonos Arc bịara iji dochie Sonos Playbar, ụda ụda ahụ na ọtụtụ njikọ nke Sonos nyere ruo ugbu a, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Sonos Beam na-ejekwa ozi dị ka ogwe ụda, a na-ahaziri ya karịa maka ọkpụkpọ multimedia ahụ. , ọ bụ ibu na enweghị ọtụtụ njikọ dị ka Playbar. N'ihe banyere ya mgbanwe mbụ bụ nnwepụta pere mpe pere mpe nke ọ gbanwere, Sonos Arc nabatara grid nke usoro ngwaahịa ohuru dika Sonos Move na Sonos One. Dị ka mgbe niile, anyị ga-enweta ya n'ime oji na ọcha.
Na usoro nke ụda, anyị ga-enwe iri na otu "D" klas dijitalụ amplifiers, asatọ elliptical woofers na atọ tweeters na a kpọmkwem imewe. Na mgbakwunye, iji na-enyocha ụda mgbe niile anyị ga-enwe igwe okwu anọ nwere usoro, yabụ ị nwere ike melite ahụmịhe ahụ site na sistemu mmezi Trueplay a ma ama. O doro anya na anyị ga-enwe "Night Mode" na ihe nha nhazi nhazi site na ngwa ahụ, nke a ga - eme ka ọ dị ọhụrụ iji megharịa sistemụ arụmọrụ nke ngwaọrụ Sonos kachasị ọhụrụ, yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa ịmegharị. O doro anya na ọkwa ọkwa nke a Sonos Arc na-ekwu ụzọ.
Ahịa: € 899
Banyere njikọta, anyị ga-enwe ọdụ ụgbọ Ethernet ruru 100 Mbps na njikọ RJ45, njikọ 2,4 GHz WiFi yana, dịka ọ dị na mbụ, njikọta site na protocol Apple's AirPlay 2. Anyị ga-enwetakwa onye na-anabata IR nke ga-enye anyị ohere ịmekọrịta ya na BroadLink anyị ma ọ bụ njikwa ntanetị. O doro anya na Sonos Arc nwere ihe nkwụnye ọkụ maka ntinye anya yana HDMI. Teknụzụ eARC nke Sonos Arc ga-enye anyị ohere ịchịkwa televishọn na o doro anya na anyị nwere ndakọrịta na HomeKit, Google Assistant na Amazon Alexa. Mana anyị achọghị ịhapụ ihe kachasị mkpa, ngwaọrụ a ga-adaba na Dolby Atmos iji nye ezigbo ụda 3D.
Sonos Sub - Companylọ ọrụ zuru oke
Sub bụ ihe mgbakwunye ngwaahịa na, ọ bụ ezie na e meghị ya maka ndị niile na-ege ntị, ọ bụ nkwado zuru oke maka ndị nwere ohere na ọkwa nke oghere na ụda. Sonos Sub bu nnoo "subwoofer" nke onu ogugu bu nke na ewere uru nke njiri mara ma soro ndi ahia anyi nwere ike inwe n'ime ulo. Sonos Sub a na - achota obere mmeghari ohuru ma gha enye ya agba abuo, oji na nke ocha.
N'ihe banyere ụda, anyị nwere igwe okwu dijitalụ "D" abụọ, draịva kagbuo abụọ iji melite ogo nke ụda a rụpụtara yana kwa ọdụ ụgbọ mmiri nwere okpukpu abụọ. Banyere ugboro ole, Sonos kwere nkwa na ọ ruru 25Hz nke bụ eziokwu dị oke mkpa iji buru n'uche na ọkwa teknụzụ. na ọkwa ọkwa dị mma nke na ọ nwere ike inye. Banyere atụmatụ ndị ọzọ, anyị ga-enwe otu ike dịka ngwaahịa Sonos ndị ọzọ na ọkwa Trueplay na ihe niile ngwa Sonos nwere ike ime.
Ahịa: € 799
Ngwaọrụ a nwekwara njikọta 2,4 GHz WiFi yana ọdụ ụgbọ Ethernet site na RJ45 ọ bụrụ na njikọta ụlọ gị anaghị emezu ihe achọrọ. Ọ ga - adị site na June 10 na - esote na ezi ndepụta nke mba gụnyere Spain, Germany, France na Latin America niile ebe Sonos nwere ọnụnọ ya. Nke a Sonos Sub bụ teknụzụ nke abụọ maka ngwaahịa Sonos n'ozuzu ha na-enye ezigbo bass dị ike, mana enweghị obi abụọ, mgbe anyị chọrọ ahụmịhe zuru oke, subwoofer na-eso ngwa ngwa ọ bụla.
Sonos Ise - Rightkpụrụ Kwesịrị Ekwesị
Anyị na-aga n'ihu na ngwaahịa na ike kachasị ike nke ngwaahịa Sonos, Ise. Nnukwu mmiri a enwetakwala nwetụrụ eserese, ezubere iji lụọ n'ụzọ zuru oke na ngwaahịa Sonos ndị ọzọ n'ihe gbasara ịkwa ụta, ihe atụ bụ na ugbu a ise nwere ọcha grille na ụdị ọcha ya. O doro anya na mmezigharị nke Sonos Five ọhụrụ bụ nke kachasịnụ, ma ọ na-eme mgbanwe ụlọ na nhazi na n'akụkụ dị iche iche nke ngwaike, obi abụọ adịghị ya na ọ na-adọrọ mmasị n'akụkụ niile.
Ihe ngosi Sonos a nwere ihe nhazi isii nke "D" dijital na-agbakwunye ya na onyonyo atọ na midwoofers. Dịka anyị kwuru, anyị ga-enwe njikọ 3,5mm Jack na mgbakwunye na arụmọrụ ndị ọzọ dịka TruePlay. Anyị nwekwara njikwa mmetụ kpochapụwo n'elu na ndakọrịta na Amazon Alexa, Google Assistant yana AirPlay 2 na Apple HomeKit, Ọ bụ maa otu n'ime ihe ndị kasị zuru ezu na ngwaahịa na Sonos nwere na ya katalọgụ na okwu nke ike, ụda àgwà na n'ụzọ zuru ezu kemeghi equalization.
Anyị ga-enwetakwa ngwaahịa dị na June 10, 2020 site na 579 XNUMX, nke dị ọnụ ala karịa ngwaahịa atọ gosipụtara ma o doro anya na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa. Sonos Five na-enye ike dị ukwuu na ọdịnaya na-atọ ụtọ, nke mere na ọ bụrụla ọkacha mmasị nke ọtụtụ ndị ọkachamara mara ọkwa. Anyị ga-elebara anya na akụkọ ndị a ma anyị ga-agwa gị ozugbo ha nọ n'ahịa iji nwee ike nyochaa ha wee gwa gị ihe ahụmịhe anyị nwere
Ngwaahịa Sonos ọhụrụ ndị a ọ bara uru? Gwa anyị echiche gị na igbe igbe ma cheta na anyị na-arụsi ọrụ ike na netwọk mmekọrịta maka ihe ị chọrọ, gbakwunye Akụrụngwa Akụkọ na ọkacha mmasị gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Sonos weputara Arc, igwe egwu di egwu na ihe ndi ozo